Isimo Sezulu Sokusekela iJa Ja, hhayi iBlah Blah, Isizukulwane Esisha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Imiklomelo » Isimo Sezulu Sokusekela iJa Ja, hhayi iBlah Blah, Isizukulwane Esisha
Imiklomelo • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-ICTP • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Abasebenzi beCentre for Responsible Travel (CREST) ​​kanye neBhodi labaQondisi baqala umklomelo waminyaka yonke iMartha Honey Legacy Award ngo-2019 njengendlela yokwazisa umuntu othile embonini yezokuvakasha emhlabeni wonke owenza umehluko omkhulu ekuphusheni imvilophu ekuhambeni okunomthwalo wemfanelo.
Lo mklomelo ubungaza ubuholi obucatshangwayo bezokuvakasha obuluhlaza obuthinta isikhathi eside bukaMartha Honey, obunikezwa udumo lwakhe.
UMartha Honey ungu-Co-Founder kanye noMqondisi u-Emeritus we-Centre for Responsible Travel (CREST), ezinze eWashington, DC.
Emashumini amabili edlule, ubhale futhi wafundisa kabanzi ngokuvakasha kwezemvelo, ukuthinta ezokuvakasha, ezokuvakasha kwezokuvakasha nezokungcebeleka, ukuguquguquka kwesimo sezulu nezinkinga zezitifiketi.
Kulo nyaka, uMnu. Geoffrey Lipman, Umsunguli We-SUNx - Strong Universal Network, kanye noMongameli we Abalingani Bezulu Besimo Sezwe Nezokuvakasha (ICTP), yamenyezelwa njengomamukeli we-2021 we-2021 Martha Honey Legacy Award kusuka kwa-CREST.
Okulandelayo ngamazwi kaMnu. Lipman ngokuthola lo mklomelo ohlonishwayo:
Ngifuna ukubonga i-CREST ngalo mklomelo ohloniphekile futhi ngihloniphe ubuholi obucatshangwayo bezokuvakasha obuluhlaza obucatshangelwe isikhathi eside bukaMartha Honey, obunikezwa udumo lwakhe. Ngiyajabula ukuthi sathengisa imicabango ngesikhathi esiphucukile sama-1990s okuqala hhayi emhlabeni opholile, onenzondo Othelelekile, weTrumpian wanamuhla. Kusivumele ukuthi size ezindabeni ezifanayo ngezindlela ezahlukahlukene, ngenhlalonhle nangokuziphatha okuhle.
Ngiyawemukela lo Mklomelo, hhayi kakhulu mina, kepha njengokwamukela ugqozi engangiluthola emuva ngaleso sikhathi kumngane wami kanye nomeluleki wami iminyaka engama-25, uMaurice Strong ongasekho - owayezinzile futhi eyisishoshovu sesimo sezulu eminyakeni eyikhulu edlule.
Futhi ngiyamangala ngalokho akufezile ezingeni lomhlaba.
UMaurice Strong ofanayo owahlela i-Earth Summit yango-1972 kanye neRio Earth Summit yango-1992 - enabaHoli BoMbuso abangu-124. Ngubani owaqondisa ukuzalwa kwe-UNEP, i-IPCC, i-UNFCCC, i-Earth Charter, kanye nomnikelo kaTed Turner wezigidigidi zamarandi ku-UN Foundation. Futhi ngokusobala yayinezigxivizo zeminwe kuma-MDGs, ama-SDG, kanye neParis Climate Accord.
Njengoba nje umbono wakhe ubhakwe kwi-DNA ye-SUNx Malta, ifa kuye esikhaleni seTravel & Tourism, i-NGO ezinze e-EU, ibambisene nohulumeni waseMalta ukuthuthuka Isimo Sezulu Ukuhamba Okungumngane.
Umlayezo wami namuhla, ovela ku- SUNx Malta, kanye nokubonga kwami ​​kwangempela ku-CREST nge-Award, kuqukethe amaphuzu amathathu.
Okokuqala, Inkinga Yesimo Sezulu iyatholakala - idinga ukugxila kwethu okuyinhloko. Futhi iyayidinga manje. Lona ngunyaka oshisa kunayo yonke enkumbulweni yakamuva, nemithelela emibi kakhulu ekhuphuka emhlabeni jikelele. I-trajectory yethu yokukhishwa kwama-2030 yamanje ingukukhuphuka okungu-16% kunokuba kwehle ngo-50% okudingekayo ukuze kuhlale kuthrekhi kuye kumkhawulo we-1.5-degree.
Okwesibili, Isimemezelo Sokuvakasha SaseGlasgow siyisinyathelo esiqonde ngqo, kepha kufanele siqhubekele phambili, ngokushesha. Sidinga i-DASH-2-Zero, i-Net Zero Carbon 2030 kune-2050 futhi ngo-2050 (3 eminyaka kude) asidingi i-GHG. IDASH imele Isimemezelo: Umthetho: Ukusekelwa neThemba.
Okwesithathu, ithemba lethu elikhulu iNtsha, okuyothi njengoba uGreta Thunberg esho ukuthi kuzofanele ihlanze ubucayi bethu. Intsha yanamuhla yiJa Ja - Yebo singakwazi ukukhiqiza. Hhayi i-blah blah - njengoba iThunberg isho okwethu. Bazothatha izinyathelo ezinzima ezidingekayo ukuze baphile ne-Climate Crisis - ngoba ayipheli.
Futhi kufanele sibanikeze ukuxhaswa nethemba elikufanele.
Njengoba i-Innuits isho, "Asiwudli ifa lomhlaba kubobaba, siliboleka ezinganeni zethu." Ngiyabonga
Mayelana ne-SUNx Malta
I-SUNx yinhlangano esekwe e-EU, engenzi nzuzo, esungulwe njengefa likaMaurice Strong, iphayona lesimo sezulu nokusimama, futhi ibambisene nohulumeni waseMalta.
I-SUNx Malta idale uhlelo oluthi "Green & Clean, Climate Friendly Travel System" olwenzelwe ukusiza izinkampani zezokuvakasha nezokuvakasha kanye nemiphakathi ukuthi iguqulele ku-Climate Economy entsha. Lolu hlelo lususelwa ekwehliseni ikhabhoni, ukuhlangabezana nezinhloso zokuthuthukiswa okusimeme, nokufanisa umzila we-Paris 1.5C. Kungumsebenzi futhi kugxile kwezemfundo - kusekela izinkampani zanamuhla nemiphakathi ukuthi zifeze izifiso zazo zesimo sezulu futhi zikhuthaze abaholi abasebasha bakusasa ukuba bazilungiselele ukuthola umvuzo wemisebenzi emkhakheni wezokuvakasha. Umsunguli wayo noMongameli uSolwazi Geoffrey Lipman.
SUNx IMalta ifuna iDASH-2-Zero yomkhakha onamandla wokuhamba nezokuvakasha. Ukuphokophela isenzo esisheshayo ngokushesha okukhulu. Yebo, ku-Net Zero Carbon, kodwa ngonyaka ka-2030 kanye nokuzibophezela KUNGAKHO amagesi eGreenhouse ngonyaka ka-2050. IDASH isho ukumemezela nokwenza ngokusekela kanye nethemba. ILANGAx IMalta iqeqesha ama-Strong Climate Champions amancane ayi-100,000 kuwo wonke amazwe ase-UN ngonyaka ka-2030. Ngokubambisana nabalingani bethu be-Sustainable Development Goal (SDG-17), sinikeza i-UNFCCC exhumene I-Registry Yesifiso Esisheshayo kanye nokwesekwa kwezinkampani ezinobungani besimo sezulu kanye nemiphakathi.
Ngemininingwane engaphezulu sicela uxhumane no-Olly Wheatcroft [i-imeyili ivikelwe]
Novemba 21, 2021 ku-23: 31
I-Hablan de Cambio Climático y la Elite Luciferinas nos gasean todos los día con el “Proyecto HAARP” kusukela eminyakeni engu-20 edlule, kanye nezindawo eziningi ze-Océanos estan llenos de los barriles de residuos de Uranios de 238 des cents de centro… ..!¡